PressReader - Isolezwe: 2018-02-15 - Ithemba leTop 10 kokwiDusi
Ithemba leTop 10 kokwiDusi
AMAVA awathole egwedla emijahweni emine edlule yeFNB Dusi Canoe amnikeza ithemba lokufeza iphupho lakhe lokubalwa nabayishumi abaphambili uSipho Canham waseMatikwe, eNanda.
UCanham (27) uqale ukungenela umjaho ngo-2014 waqeda kwabangu-100 abaphambili. Ngonyaka olandelayo uthole indawo kwabangu-50 kwathi ngo2016 wangena kwiTop 15. Nyakenye wathola indawo kwabangu-30 bokuqala egwedla yedwa.
IDusi eyi-K2 kulo nyaka iqalile eMgungundlovu ngo-6 ekuseni kanti isigaba sokuqala sizophelela eMkhambathini.
Kusasa kuzoqhutshekwa iphelele eNanda Dam, bese kuba yisigaba sokugcina ngoMgqibelo esisongwa eBlue Lagoon eThekwini.
“Ngesikhathi ngiqala bengingazi lutho ngomfula njengoba bengiziqeqesha edamini futhi nomgudu okuhanjwa ngawo ngingawazi. Bengilandela abaphambi kwami ngisho ngabe bahamba kancane kanjani ngoba ngifuna ukubona indlela. Kule minyaka sengifunde okuningi ngaxhumana nabanye abantu abanesipiliyoni. Yingakho ngibheke ukuthi mina nophathina wami singene kwiTop 10,” kusho uCanham.
Ubambisene noKwanda Mhlophe kulo mshikashika wokwenyusa isibalo sendlu emnyama eyenza kahle kulo mjaho osathathwa njengowabelungu.
Abagwedli abamnyama asebezakhele igama kwiDusi ngoMichael Mbanjwa, S’bonelo Khwela noBanetse Nkhoesa.
“Kulo nyaka umuntu uzikhandle kakhulu ezilungiselela. Uma sifika kwiTop 10 siyojabula kakhulu. Ukuziqeqeshela umjaho kuthatha isikhathi eside njengoba siqale ngoSepthemba. Kwesinye isikhathi besingakwazi ukuziqeqesha nozakwethu ngoba ubamba amatoho kodwa uma sihlangana emijahweni besitholana kakhulu. Kumqoka ukuthi nizwane nangokomoya ngoba ziningi izingqinamba enihlangana nazo endleleni ezidinga ukuthi nibambisane,” kusho uCanham.
Ngaphandle kokufisela yena noMhlophe okuhle, inhliziyo yakhe izobe isezitshudenini zakhe aziqeqesha ngaphansi kweKing Fisher Development Club.
Unabagwedli abayisishiyagalolunye abazibekisela indawo kwiDusi.
“Abayisikhombisa babo bayaqala. Ngijabule kakhulu ngoThemba Chonco noNhlakanipho Mdluli abangene ohlwini lwabaphambili. Kuyimanje kumele ngiyobalungisela isikebhe sabo siphukile. Ngizojabula uma beba kwabangu-50 abazoqeda kuqala,” kusho uCanham obexoxa neSolezwe ngoLwesibili ntambama.
Ukhuluma ngesikebhe esidinga ukulungiswa nje, uthe usenenkinga yokweswela izimpahla zokwenza lo mdlalo entsheni ayiqeqeshayo.
“Siyalundinga kakhulu uxhaso. Awubi lula lo mdlalo uma ungenakho okudingeka kuwona. Okubalulekile nje yisikebhe, izinduku zokugwedla, i-life jacket namateki okugijima. Noxhaso lwezinto zokuhamba nokudla okufanele nakho kubalulekile,” kuphetha uCanham.
USIPHO Canham wethemba ukuthi uzokwenza kahle kwiFNB Dusi Marathon ka-2018 esuke namuhla eMgungundlovu